Filannoo Biyyaalessaa fi Jeequmsa RFDI ilaalchisuun Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsFilannoo Biyyaalessaa fi Jeequmsa RFDI ilaalchisuun Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo
Addi Bilisummaa Oromoo filannoo haqa qabeessaafi bilisaa fi ijaaramuu mootummaa RFDI dimokraatawaa hunda hammatetti amana. Paartiin biyya bulchaa jiru filannoo biyyaalessa 6ffaa bara 2021tti gaggeessuuf karoorsuurratti jiraatuu argaa jirra. Filannoo dimokraatawaa rakkina siyaasaa biyyattii keessaa furuutti qooda ijaaraa gumaachu gaggeessuuf nagaa fi sabatiinsi mirkanaahuunfi hirmaannaan paartilee siyaasaa murteessaa dha jennee amanna.
Haa tahu malee, haala jeequmsi RDFI keessaa amma jiruun filannoo gaggeessuuf karoorsuun fakkeessimaaf yoo tahe malee, dhugaaf hin fakkaatu. Paartiin biyyattii bulchaa jiru rakkoolee jiran dhoksuun xiyyeeffannaa jiru gara filannoo biyyaalessaa deebisuuf tattaafatus, biyyattiin jeequmsa nageenyaa fi siyaasaa walxaxaa fi akkaan ulfaataa keessatti kuftee jiraachuun hubatamaa dha.
Waggoota lamaa fi walakaa dabreef ABO fi paartileen siyaasaa biroo sochii mul’ataa taasisaa jiran jeequmsi kun akka dhalatuuf deemu fi odoo yeroon hin dabarre furmaanni siyaasaa hundeerraa akka laatamuuf paartii biyya bulchaa jiruuf akeekaa turan. Seeraa fi sirni akka kabajamee adeemsa jijjiirama dimokraatawaa keessatti hundi qixa akka fayyadamuuf deeggarsa keenyas gumaachaa turre. Haa tahuu garuu, paartiin biyya bulchaa jiru yaada nuti dhiyeessine moggaatti dhiisuu qof aodoo hin taane, caasaa tikaa isaatti fayyadamee dhaaba keenyaa fi sochii nuti guutummaa biyyattii keessatti taasisnu danquutti bobba’e.
Ammayyuu biyyattii keessa rakkoo siyaasaa fala hin arganne guddaatu jira. Kanaan alas jeequmsi heeraa fi rakkooleen lammiilee akkasumas gaaffileen paartileen siyaasaa dhiyeessan akka seeraa fi heera RFDI irra jiruutti deebisaan hin laatamneef. Sirni haqaa biyyattii bilisa tahee hojii isa raawwachuu hin dandeenye; caasaan tikaa, poolisaa fi humnoonni hidhattootaa biroo ajaja mana murtii malee ifatti biyyattii bulchaa jira; bulchiinsotni naannolee kan akka Oromiyaa ammayyuu ajaja Komaandi Poostii waraanaa jala jiraachuu fi caasaan bulchiinsa siviilii diigamuun waan ifatti mul’atu.